I-horror vacui ngu-Uomo Nero, ukupeyinta ioyile nguFulvio di Piazza | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Kwiminyaka emibini edlulileyo besikhankanyiwe ukusetyenziswa kwezithuba ezingenanto ngokuchasene ne "horror vacui." Eli binzana lesiLatin Ngokwenyani lithetha ukoyika ukuba lilize kwaye isetyenziswe kwimbali yobugcisa, ngakumbi ekugxekeni ukupeyinta, ukuchaza ukuzaliswa kwayo yonke indawo engenanto emsebenzini wobugcisa ngolunye uhlobo loyilo okanye umfanekiso.
Kuyilo olunxibelelanayo lweCeltic esinokulufumana omnye wemizekelo yeHorror vacui okanye emsebenzini Uomo Nero nguFulvio Di Piazza. Umzobi osebenzisa ioyile ukuthatha eli gama kwisichazi sakhe esikhulu ukugcwalisa zonke izithuba ngeenkcukacha ezinkulu, njengakulo msebenzi ukhankanyiweyo okanye uninzi lwawo.
Eli gama linokunxulumana nohlalutyo loluvo olubizwa "Indalo ilithiyile ikhefu" kwaye oko kucebisa ngokwayo ngendlela amandla endalo athambekele ekwandiseni nasekugcwaliseni nasiphi na isithuba okanye umngxunya.
UDi Piazza ukwamele ukudala Imizobo yeoyile yobukhulu obukhulu Apho imiboniso emnandi eneentlobo zonke zeendawo, ezinjengamahlathi okanye iziqithi ezisesibhakabhakeni, zibonakaliswa yimibala emnyama yokumithisa yonke into emnyama.
Uomo Nero ubonakala ngaphezulu kwe- yenziwe ngesixhobo sedijithali ingaba yi-Photoshop njani kunokuba ibrashi kunye nenani elikhulu leoyile, ngakumbi kwezo nkcukacha zokuqamba isiqwenga esikhethekileyo, ekukho nzima kuso ukufikelela kwizigqibo ezithile ukuba sithatha kwifantasy nakuloyiko.
Ukusetyenziswa kwaloo nto Iphalethi yombala omnyama kwimizobo yakhe kunye nobuninzi bamafu ajikelezayo kukhokelele abantu abaninzi ukuba bathande ukuba umsebenzi wakhe awunathemba. Ngapha koko, u-di Piazza uthi umsebenzi wakhe we-surrealist waphefumlelwa ngu-Jeremy Rifkin ithiyori kunye nezoqoqosho, ngakumbi kwincwadi yakhe ethi Entropy.
Ndikushiya ne iwebhusayithi yakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Uomo Nero, iqhekeza lobugcisa elibonisa oko kubizwa ngokuba yi-horror vacui